Nyore kugadzira uye inonaka microwave broccoli keke | Kicheni Mapepa
Microwave broccoli keke
Carmen Guillen | | Zvidyo, Vegetable Recipes, Special Recipes, Nyore Mapepa
Chinhu chakanaka kuwana maresipi matsva, mwenje padumbu uye nekukurumidza uye nyore kugadzira ndeyekuti isu takabva tangovaisa mukuita kuti tiuye navo pano. Aya marudzi eeresipi anogamuchirwa kwazvo newe, uye ikozvino, muzhizha (zvirinani kuno kuSpain kuri uye kuri kupisa zvakanyanya), hatidi kudya zvinhu zvakanyanyisa kupisa uye hatidi kushandisa zvakawandisa nguva mukicheni uchiita kudya kwemasikati kana kudya kwemanheru.
Ndokusaka isu tiri zana muzana tichigutsikana kuti iwe uchada iyi recipe ... Unofanira kuyedza!
Microwave broccoli keke iri nzira yakanaka yekudya kwemanheru kana kuperekedza kosi yekutanga pakudya. Iyo inonaka uye zviri nyore kwazvo kugadzira!
Kubika nguva: 17 M
Nguva yakazara: 27 M
500 gramu e broccoli (yaimbobikwa)
150 gramu cheddar cheese (yakatorwa)
200 ml yecheche
Chidimbu chevhu pasi pepuru
Chinhu chekutanga chatichaita ndeche bika broccoliuye kana tisina zvakabikwa. Ichave inokwana kuiwedzera muhari, nemvura inoifukidza zvachose uye munyu. Isu tinobika kweinenge 5 minutos.
Zvichakadaro, tiri kuzowaridza mafuta omuorivhi mumudziyo watinozoshandisa keke redu re broccoli. Nenzira iyi, isu tinoona kuti haina kuomerera kumadziro uye tinokwanisa kuibvisa kuti ive nyore kupenda.
Chinhu chinotevera chichava kutora bol y wedzera mazai matatu, iwo 3 ml yemukaka (isu tashandisa zvakajairwa semi-skimmed), a pini yemunyu sepepuru nhema yepasi. Tinorova zvakanaka kusvika tawana musanganiswa wakafanana.
Kana iyo broccoli yabika, tichaenda kuisuma mumudziyo zvakaenzana uye tobva tawedzera musanganiswa wekare watakarova mundiro. Chinhu chekupedzisira chatichazowedzera chichava icho cheddar cheese taquitos. Tichagovaisa zvakanaka mukati memudziyo (kwete kwete pamusoro chete asiwo mukati).
Uye chekupedzisira chinhu chichava kuisuma mu microwave, pasimba rakazara, ingangoita maminetsi 15-17.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Microwave broccoli keke
Hove mu microwave muto